Jizọs Apụta n’Ihu Ọtụtụ Ndị Mgbe A Kpọlitechara Ya n’Ọnwụ | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
LUK 24:13-49 JỌN 20:19-29
JIZỌS APỤTA N’IHU NDỊ NA-ESO ỤZỌ YA ABỤỌ NA-AGA EMEỌS
Ọ KỌWAARA NDỊ NA-ESO ỤZỌ YA IHE E DERE N’AKWỤKWỌ NSỌ
TỌMỌS AKWỤSỊ INWE OBI ABỤỌ
Na Sọnde, abalị iri na isii n’ọnwa Naịsan, ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ ná mwute. Ha aghọtaghị ihe mere ili Jizọs ji tọgbọrọ chakoo. (Matiu 28:9, 10; Luk 24:11) Mgbe e mechara n’ụbọchị ahụ, otu onye na-eso ụzọ Jizọs aha ya bụ Kliopas na onye ọzọ na-eso ụzọ Jizọs si Jeruselem na-aga Emeọs. Isi na Jeruselem gaa Emeọs dị ihe dị ka kilomita iri na otu.
Ka ha na-aga n’ụzọ, ha nọ na-akparịta ihe merenụ na Jeruselem. Mgbe ha nọ na-akparịta ụka a, onye ha na-amaghị onye ọ bụ sonyeere ha. Onye ahụ jụrụ ha, sị: “Gịnị bụ ihe ndị a unu na-arụ ụka ya ka unu na-aga n’ụzọ?” Kliopas jụrụ ya, sị: “Ị̀ bụ onye ọbịa na Jeruselem nke na-enweghị onye ya na ya na-emekọrịta ihe, nke mere na ị maghị ihe ndị mere n’ime ya n’ụbọchị ndị a?” Onye ahụ wee sị ha: “Ihe ndị dị ka gịnị?”—Luk 24:17-19.
Ha gwara ya, sị: “Ihe mere Jizọs onye Nazaret.” Ha gwakwara ya, sị: “Anyị nọ na-enwe olileanya na nwoke a bụ onye a kara aka ịnapụta Izrel.”—Luk 24:19-21.
Kliopas na onye ya na ya so kọọrọ ya ihe ndị mere na Jeruselem n’ụbọchị ahụ. Ha kwuru na ụfọdụ ụmụ nwaanyị, ndị gara n’ebe e liri Jizọs, ahụghị ozu Jizọs. Ha hụkwara ihe dị ebube, ya bụ, ndị mmụọ ozi, ndị gwara ha na Jizọs dị ndụ. Ha gwakwara ya na mgbe ndị ọzọ gara n’ili ahụ, “ha hụkwara ya otú ahụ, dị nnọọ ka ndị inyom ahụ kwuru.”—Luk 24:24.
Ihe ndị a merenụ gbagwojuru ndị na-eso ụzọ Jizọs abụọ ahụ anya. Onye ahụ sonyeere ha mere ka ha kwụsị iche ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị, nke bụ́ ihe na-emebi ha obi. Ọ sịrị ha: “Unu ndị na-amaghị ihe, ndị obi ha na-adịghịkwa ekwere ihe niile ndị amụma kwuru ngwa ngwa! Ọ̀ bụ na ọ dịghị mkpa ka ihe ndị a mee Kraịst, ka ọ banyekwa n’ebube ya?” (Luk 24:25, 26) Ọ kọwaara ha ihe ndị e dere n’Akwụkwọ Nsọ banyere Kraịst.
Ha atọ mechara ruo Emeọs nso. Ndị na-eso ụzọ Jizọs ahụ chọrọ ka onye ahụ so ha kọwakwuoro ha Akwụkwọ Nsọ. N’ihi ya, ha sịrị ya: “Nọnyere anyị, n’ihi na o ruwela mgbede, ụbọchị agwụwokwa agwụ.” O kwetara ka ha na ya nọrọ, ya esorokwa ha rie nri. Mgbe ha na-eri nri, o kpere ekpere, nyawaa ogbe achịcha, nye ha ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka ha matara onye ọ bụ. Ozugbo ha matara ya, ọ pụrụ n’anya ha. (Luk 24:29-31) Obi bịaziri sie ha ike na a kpọlitela Jizọs n’ọnwụ.
Ndị na-eso ụzọ Jizọs abụọ ahụ ji obi ụtọ kwuo otú ihe ha na ya kparịtara dị ha n’obi. Ha sịrị: “Ọ̀ bụ na obi ekporoghị anyị ọkụ mgbe ọ nọ na-agwa anyị okwu n’okporo ụzọ, mgbe ọ nọ na-akọwara anyị Akwụkwọ Nsọ nke ọma?” (Luk 24:32) Ha mere ngwa ngwa laghachi Jeruselem. Mgbe ha ruru, ha hụrụ ndịozi na ndị ọzọ so ha nọrọ. Tupu Kliopas na onye ya na ya so ekwuo na ha ahụla Jizọs, ndị nọ ebe ahụ kwuru, sị: “N’ikwu eziokwu, a kpọlitere Onyenwe anyị, ọ pụtakwara n’ihu Saịmọn!” (Luk 24:34) Mmadụ abụọ ahụ na-eso ụzọ Jizọs kwuziri otú Jizọs si mee ka ha mata onye ọ bụ. N’eziokwu, ha esorola ná ndị hụrụ Jizọs.
Ugbu a, otu ihe tụrụ ha ụjọ mere. Jizọs batara n’ime ụlọ ha nọ. Ọ dị ha ka ọ̀ bụ ná nrọ n’ihi na ha mechiri ụzọ emechi, ebe ọ bụ na ha na-atụ ụjọ ndị Juu. N’agbanyeghị na ha mechiri ụzọ emechi, Jizọs guzo n’ihu ha ugbu a. O medara obi gwa ha, sị: “Udo dịrị unu.” Ma ụjọ ji ha. ‘Ha chere na ha na-ahụ mmụọ.’ O nweekwala mgbe ha hụrụ Jizọs chee na ọ bụ mmụọ.—Luk 24:36, 37; Matiu 14:25-27.
Jizọs gosiri ha aka ya na ụkwụ ya iji mee ka ha mata na ya abụghị mmụọ ma ọ bụ ihe ha na-eche n’echiche. O mere ka ha mata na ya nwere ahụ́ mmadụ. Ọ sịrị ha: “Gịnị mere unu ji na-echegbu onwe unu, gịnịkwa mere unu ji na-enwe obi abụọ? Leenụ aka m na ụkwụ m, na ọ bụ mụ onwe m; metụnụ m aka ka unu wee hụ, n’ihi na mmụọ adịghị enwe anụ ahụ́ na ọkpụkpụ dị nnọọ ka unu na-ahụ na m nwere.” (Luk 24:36-39) Ihe a ọ gwara ha mere ka obi tọọ ha ụtọ. Ma ha ka nwetụrụ obi abụọ na ọ bụ ya.
Jizọs gbalịkwuru ime ka ha mara na ọ bụ ya. Ọ jụrụ ha, sị: “Ọ̀ dị ihe unu nwere ebe ahụ unu ga-eri?” Ha nyere ya otu iberibe azụ̀ a mịrị amị, ya ataa. Ọ gwaziri ha, sị: “Okwu ndị a ka m gwara unu mgbe mụ na unu ka nọ [ya bụ tupu e gbuo m], na ihe niile e dere n’iwu Mozis na n’Akwụkwọ Ndị Amụma na Abụ Ọma banyere m aghaghị imezu.”—Luk 24:41-44.
Jizọs nyeere Kliopas na onye ya na ya so aka ha amata ihe ndị dị n’Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụkwa ihe o meere ndị a ha na ya nọ ugbu a. Ọ sịrị ha: “Otú a ka e dere ya na Kraịst ga-ata ahụhụ ma si n’etiti ndị nwụrụ anwụ bilie n’ụbọchị nke atọ, ọ bụkwa n’aha ya ka a ga-ekwusa nchegharị nke na-eme ka a gbaghara mmehie. A ga-ekwusa ya ná mba niile malite na Jeruselem. Unu ga-abụ ndị àmà nke ihe ndị a.”—Luk 24:46-48.
N’ihi otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, Tọmọs onyeozi anọghị mgbe ahụ Jizọs batara. Ndị ọzọ na-eso ụzọ Jizọs mechara gwa ya, sị: “Anyị hụrụ Onyenwe anyị!” Tọmọs kwuru, sị: “Ọ bụrụ na mụ ahụghị apa ntu n’aka ya, rụnyekwa mkpịsị aka m n’apa ntu ndị ahụ, rụnyekwa aka m n’akụkụ ya, agaghị m ekweta ma ọlị.”—Jọn 20:25.
Mgbe ụbọchị asatọ gachara, ndị na-eso ụzọ Jizọs zukọkwara ọzọ n’ime ụlọ. Ha mechikwara ọnụ ụzọ ya emechi. Ma na nke ugbu a, Tọmọs so ha nọrọ. Jizọs batakwara n’ime ụlọ ahụ n’ụdị mmadụ ma kelee ha, sị: “Udo dịrị unu.” Jizọs lere Tọmọs anya ma sị ya: “Rụnye mkpịsị aka gị n’ebe a, lee aka m, werekwa aka gị rụnye n’akụkụ m, kwụsịkwa ịbụ onye na-adịghị ekweta ihe kama na-ekweta.” Tọmọs sịrị ya: “Onyenwe m na Chineke m!” (Jọn 20:26-28) Ugbu a, obi esiela ya ike na Jizọs adịla ndụ, bụrụkwa mmụọ na-anọchite anya Jehova Chineke.
Jizọs gwara Tọmọs, sị: “Ọ̀ bụ n’ihi na ị hụrụ m ka i ji kweta? Obi ụtọ na-adịrị ndị na-ahụghị ihe ma kweta.”—Jọn 20:29.
Mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs abụọ na-aga Emeọs, gịnị ka onye ahụ ha na-amaghị jụrụ ha?
Gịnị mere obi ji kporo ndị na-eso ụzọ Jizọs abụọ ọkụ?
Mgbe Kliopas na onye ya na ya so laghachiri Jeruselem, olee akụkọ ha nụrụ nke mere ha obi ụtọ? Oleezi ihe merenụ?
Olee ihe mere Tọmọs jizi kweta na Jizọs adịla ndụ?
Ebe ọ bụ na mbilite n’ọnwụ Jizọs so n’ihe dị oké mkpa Baịbụl na-akụzi, anyị kwesịrị ịmata ma ò mere eme n’eziokwu.